कपिलवस्तुको क्वारेन्टिनबाट भागे एघार जना - हिमाल दैनिक
#Covid19Update, प्रदेश न. ५, समाज
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १३:००
Buy Phentermine 37.5 In The Uk पन्ध्र दिनको क्वारेन्टिन अवधि पूरा भए पनि किट अभाव भन्दै करीब २० दिनसम्म परीक्षण नगरिएपछि उनीहरु भागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “संघ र प्रदेश सरकारले समयमै परीक्षण किट उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या झन् बल्झिएको छ ।”
http://nancynorthcott.jim-mcdonald.net/tiny-treats-2-a-st-patricks-day-collection/ खेतीको समय रहेकाले उनीहरु भागेको हुन सक्ने वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष श्यामनारायण उपाध्यायले बताउनुभयो । दुई दिनमा गरी ११ जना भागेपछि खोजी गर्न प्रहरीचौकी रंगपुर, प्रशासन र गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएको वडाध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो ।
कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म ४७ कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । कपिलवस्तुका दश स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा सात हजार ४५१ जना छन् । हालसम्म क्वारेन्टिनमा बसेर एक हजार ८०४ जना डिस्चार्ज भएका छने । जिल्लामा पिसिआरका लागि आवश्यक पर्ने एक हजार ७६५ भिटिएम किट उपलब्ध भएकामा करीब एक हजार चार सय जनाको स्वाब संकलन भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रासस
Prevपछिल्लोकीर्तिपुरका चार जनाको आरडिटी पोजेटिभ
अघिल्लोनेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक, वैधानिकतासँगै भोग चलनको भने अत्तोपत्तो छैनNext
Buy Phentermine Overseas डा. प्रभु बुढाथोकी
Phentermine Pills Cheap नवीनचन्द्र घिमिरे